एसइइ दिने बाबु नानीको १-१ नम्बर दाजेर उनीहरु बिच ब्राजिल भर्षेष अर्जेन्टिना बनाउनु उचित हो र? - Sagun Siwakoti
HomeArticlesएसइइ दिने बाबु नानीको १-१ नम्बर दाजेर उनीहरु बिच ब्राजिल भर्षेष अर्जेन्टिना बनाउनु उचित हो र?
एसइइ दिने बाबु नानीको १-१ नम्बर दाजेर उनीहरु बिच ब्राजिल भर्षेष अर्जेन्टिना बनाउनु उचित हो र?
केहि दिन अघि मात्र एउटा समाचार आयो। स्कुल पढने बाबुले आत्महत्या गरेको। एउटा बालक त सानो किरा देख्दा पनि रमाउने स्वभावको हुनुपर्छ तर स्कुल पढने बच्चाले आत्महत्या? हामि कस्तो समाज तिर अघि बढदैछउ? एउटा सानो बच्चा जन्मना साथ डाक्टर कि पाइलोटको छप, के त्यो बच्चा दा भिन्चि जस्तो पेन्टर हुन सक्दैन र? अनि अलि ठुलो हुन्छ, ५ किलो को झोला, किताव कपि, म्याथ जानेन भने पिटाइ, के त्यो बच्चा वैकुन्ठ मानन्धर हुन सक्दैन र? अझ ठुलो हुन्छ उपभोक्ताबादको चपेटा, एस्तो लाउनु पर्ने, एस्तो देखाउनु पर्ने, साथि भाइ बीच तेरो सामान राम्रो कि मेरो, अनि स्कुलमा गिज्याउने टिचरले समेत।
अनि आउछ एसइइ। फलानो को छोरो त ८० ल्याएछ, तैले किन ७९ मात्र ल्याइस? अरे बाबा १ नम्बर कम ल्याएर के पाप भो र? ल फेलनै भइहाल्यो फेरी दिन मिलिहाल्छ, कुन ठुलो कुरो हो र? एसइइ न त कसैले कैले हेर्छ न त कहिले चाहिन्छ, केबल १२ पढ्न चाहिने सर्टिफकेटमात्र हो। पढ्नु भनेको किताब रटेर धेरै नम्बर ल्याउनु मात्र होइन। आज पढ्यो भोलि बिर्सियो। एसइइ टपरलाइ अछाम कहा छ सोदनुस, अनि नेपालको पहिलो मल्ल राजा को सोदनुस। भन्न सक्लान एसइइ देको ३ बर्ष पछि?
हरेक व्यकतिको आफ्ने प्रतिभा हुन्छ र खालि म्याथ र साइन्सको नम्बर जोडेर ठुलो सानो बनाउनु मुर्खतानै हो। प्लास टुमा साइन्स पढे ठुलो पढ्नै पर्छ फलानोले त पढ्यो रे। कस्तो मुर्खता हो यो? अज अमिर खानले ३ इडियट बनाएर बच्चा बिगार्यो रे। अहिको अभिभावक त बच्चा लाइ प्रतिस्पर्धाको गोटि सोच्छन कि के हो? खालि पैसा र मोज ठुलो भनेर अभिभावकनै बच्चालाइ देखाउछन। अनि तेही बच्चा पछि आर १ ५ र आइ फोन एक्स बाबु आमा भन्दा ठुलो देख्छ। बाबु आमाले नै बच्चाको शक्ति र रुचि के मा छ पत्ता लाइदिन पर्नेमा समाजको प्रतिस्पर्धाको गोटि पो बनाउछन। कति बच्चको यो प्रतिस्पर्धामा ढाड भाचिसक्यो कति झुन्डीसके, अब अझै कति त्यसैले अब देखि एसइइ दिने बाबु नानीको १-१ नम्बर दाजेर उनीहरु बिच ब्राजिल भर्षेष अर्जेन्टिना बनाउनु उचित होइन।
1241total visits,4visits today